Tinye ego, ego na ịmaliteghachi: Mgbakọ itinye ego na njem na WTM London
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Tinye ego, ego na ịmaliteghachi: Mgbakọ itinye ego na njem na WTM London
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Sustainability News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Tinye ego, ego na ịmaliteghachi: Mgbakọ itinye ego na njem na WTM London.
'Tinye, Ego & Malitegharịa': Mgbakọ ntinye ego nke njem nlegharị anya na 1-2 November na ExCeL, London.
Nzukọ mba ụwa na njem nlegharị anya na itinye ego (ITIC) ga-enwe ngwakọ ya (n'onwe yana mebere) Mgbakọ Nleba Nleta Nleta Mba Nile.
Site na nzuko a, ITIC bu n'obi ijikọ ndị na-etinye ego na ndị nwe ma ọ bụ ndị na-emepụta ọrụ njem nlegharị anya na-adịghị arụ ọrụ yana ebe ndị a na-enyochaghị site na gburugburu ụwa.
Nzukọ a ga-eme na Nọvemba 1, 2021, ụbọchị 1 nke WTM London, na Platinum Suite, ExCeL, London.
International Tourism and Investment Conference (ITIC) ga-ejide, yana mmekorita ya na ya Ahịa njem ụwa (WTM London), ngwakọ ya (n'onwe yana mebere) Mgbakọ Nleba Nleta Nleta Ọchịchị zuru ụwa ọnụ na 'Tinye, Ego & Malitegharịa'.
Nzuko a, nke ga-eme ka echiche ọhụrụ na nghọta maka ịmaliteghachi ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, ga-eme na 1.st Nọvemba 2021, Ụbọchị 1 nke WTM London, na Platinum Suite, ExCeL, London.
Usoro atụmatụ a ga-enye aka mee ka mgbake nke azụmahịa njem na njem nlegharị anya wee weghachi obi ike ndị njem mgbe ọrịa a na-enwetụbeghị ụdị ya.
Ọ ga-eme ka ndị dị iche iche dị iche iche dị njikere na mbido mmalite maka 2022 iji nweta ohere azụmahịa nke ga-apụta n'oge mweghachi nke njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na ụlọ ọrụ njem na-abịanụ, na-agbaso nnukwu mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi Covid-19.
Onye isi otu ITIC, Ibrahim Ayoub, na-akọwa, sị: “Nvest, Finance & Restart Summit ga-emeghe ụzọ maka mgbanwe mgbanwe mgbanwe nke na-eme ka njem nlegharị anya ga-esiwanyewanye ike ijikọ gburugburu ebe obibi, ahụike, nsonye ọha na eze na ezigbo ọchịchị n'ọdịnihu. "
Ụbọchị na-esote (2nd Nọvemba 2021), a ga-ahazi nzukọ B2B n'etiti ndị nwe ọrụ ma ọ bụ ndị mmepe yana otu ITIC. Ndị otu ITIC na-akpọ ndị nwe ọrụ njem nlegharị anya ma ọ bụ ndị mmepe na-achọ itinye ego ka ha nyefee ọrụ ha ka ITIC wee nyochaa ha n'ime ime ime ụlọ nke o debere na WTM South Gallery Room 12 na ExCeL.
Ndị otu ITIC ga-enye ndụmọdụ maka ndị bịaranụ, na-emekọrịta nkwekọrịta bara uru na itinye ego n'ime ọrụ ha.
Dr. Taleb Rifai, Onye isi oche ITIC na-ekwu, sị: “Ọrịa ọrịa a akpaghasịwo akụ̀ na ụba ụwa, ma njem nlegharị anya bụ ngalaba na-agbanwe agbanwe. N'ezie, ihe ịrịba ama na-apụta iji gosi na ngalaba ahụ na-aga n'ihu na-esi ike ya ma na-alọghachi azụ na, n'ezie, ọ na-esi na ọgba aghara ndị gara aga laghachi azụ mgbe niile. "
“ITIC na ngalaba njem nlegharị anya nke itinye ego na-achọ ịkwalite itinye ego na njem na njem nlegharị anya ọ bụghị naanị imepụta na wulite ụlọ oriri na ọ hotelụ ,ụ, ebe ntụrụndụ na akụrụngwa maka ndị njem mana anyị chọrọ itinye ego ndị a ka ọ dịgide n'echiche na ha ghọrọ mmepe sitere na obodo nke na-emepụta ọrụ. , agụmakwụkwọ, ọdịmma na ogologo oge bara uru. Na-enyere ndị SME aka itolite na irite uru na njem niile na njem nlegharị anya n'ofe ụwa maka abamuru ka ukwuu nke ndị mmadụ na obodo. "
Onye isi ihe ngosi WTM London, Simon Press na-agbakwụnye: "WTM London na-enwe obi ụtọ na ị na-akwado atụmatụ ITIC na-eduzi na 'Invest, Finance & Restart', nke na-achọ itinye ndị ọchụnta ego ọhụrụ na-akpakọrịta na ndị na-etinye ego, iji nyere aka mee ka nrọ ha bụrụ eziokwu na inye aka tinye mpaghara njem nlegharị anya nke ọma n'okporo ụzọ. mgbake."
N'ime ndị isi okwu na ndị isi echiche ndị kwadorola nsonye ha bụ:
Hon. Najib Balala, odeakwụkwọ Cabinet maka njem nlegharị anya, Kenya;
Hon. Edmund Bartlett, Minista njem nlegharị anya, Jamaica;
Hon. Phildah Kereng, Mịnịsta na-ahụ maka gburugburu ebe obibi, nchekwa ihe ndị sitere n'okike na njem nlegharị anya, Botswana;
Hon. Nayef Al Fayez, Minista njem nlegharị anya na ihe ochie, Jordan;
Hon. Memunatu B. Pratt, onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na ihe gbasara omenala, Sierra Leone;
Ian Liddell-Grainger, MP (UK) na Onye isi oche, Òtù Ndị omeiwu Commonwealth;
Elena Kountoura, onye otu nzuko omeiwu Europe;
Nwada Julia Simpson, onye isi oche nke WTTC;
Mazị Nicolas Mayer, Onye ndu njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ nke PWC;
Mark Beer, OBE, Onye isi oche nke Metis Institute;
Prọfesọ Ian Goldin, Prọfesọ nke Globalization na Development na Mahadum Oxford;
Christopher Rodrigues Onye isi oche nke Maritime & Coastguard Agency;
Ndị na-agaghị aga WTM n'anụ ahụ ga-enwe ike iso mmemme ahụ na-ebi ndụ site na ikpo okwu mebere nke ọma ma kwụsie ike.